Posted by JuneOne at 2:28 PM
sin dan lar August 29, 2009 at 3:15 PM
Rita August 29, 2009 at 3:25 PM
အော် စာရင်းဇယားများ ရှုပ်သားနော်။
ကလေးလေးကိုပဲ ကြည့်ရတာ စိတ်ချမ်းသာတယ်။
သူ့ကြည့်ရတာ အကုန် သူသိနေသလိုပဲ။ ရုပ်က... :)
အဲ သူရို့ကလည်း ခုတစ်မျိုး တော်ကြာတစ်မျိုး။
u need to pour water:)
MrDBA August 29, 2009 at 7:16 PM
ဟုတ်ပဗျာ ရေမလောင်းခဲ့ဖူးလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကလေးကို အိမ်ထောင်စုဇယားထဲထည့်ဖို့အထိ စဉ်းစားပြီး ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့လို့ တော်တော်ကြီးကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မိဘများဖြစ်ကြောင်း နှစ်ထောင်းအားရစွာ ပြောကြားလိုက်ရပါတယ်။
subuueain August 29, 2009 at 8:35 PM
လဝက နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာတော်တော်ဇာတ်ရှုတ်တယ်နော်။ သားက တော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်။ လေယာဉ်ပျံတွေသွားငေးနေတာနဲ့တူတယ်
မြန်မာပြည်မှ ပြန်မွေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေမှာ။
ကြည် August 30, 2009 at 3:06 PM
သားကြီးလာရင် လေယာဉ်ပျံကြီးမောင်းမှာ ဟီးဟီးတဲ့ သူက။
Moe Cho Thinn August 30, 2009 at 3:17 PM
ကလေးက အတော်လေး ကြီးလာပြီနော်။ ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ။ သူရီပုံကလဲ အပြစ်ကင်းလိုက်တာ။
သီဟသစ် August 30, 2009 at 9:29 PM
မJune one ရေ
ကျွန်တော်တို့တော့ ကလေးကို မြန်မာပြည်မွေးလိုက်တာဆိုတော့ အိမ်ထောင်စုစာရင်းတော့ အဆင်ပြေသွားတယ်
မဂျွန်ဝမ်းတို့မိသားစုနဲ့အတူ မော်ကျွန်းကို လိုက်ပြန်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ
Anonymous September 3, 2009 at 4:22 PM
မြန်မာပြည်မှာကတော့ ဘယ် အ၇ာမဆို လွယ်နေတာကို ခက်အောင်ပြန်လုပ်တယ်. ၇စ်တယ်. ဒီစနစ်မပျောက်သေး၇င် မတိုးတက်နိုင်ဘူး...
Myo Mon Yee Oo September 3, 2009 at 7:36 PM
ချီကြည့်ချင်တယ်။ တောက်တောက်နဲ့လျှောက်သွားတတ်နေတဲ့အရွယ်က ချစ်စရာ
kaungkinpyar September 5, 2009 at 12:09 AM
တခါတလေ ရေလောင်းလဲ ရစ်ချင် ရစ်နေတတ်ပြန်ရော၊း)
khin oo may September 19, 2009 at 1:13 PM